ပြင်ပမှာအချင်း (မီလီမီတာ): 21.7-1016.0
မြို့ရိုးကိုအထူ (မီလီမီတာ): 2.0-22
အရှည်: 1 မိန-12M သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အရှည်
မျက်နှာပြင်ကုသမှု: အနက်ရောင်ပန်းချီကား, သွပ်ရည်စိမ်, etc
ထုပ်ပိုး: ဆော့ဝဲအစုအဝေး၌ဖြစ်စေရေအထောက်အထား PVC အထည်နှင့်အတူပတ်ရစ်။
ကွန်တိန်နာအတွင်းသင်္ဘော .: အမြောက်အများသို့မဟုတ်ဝန်။
ငွေပေးချေမှုရမည့်: T / T, L ကို A / C, အနောက်ပိုင်းပြည်ထောင်စု
Applications ကို: ဒီတော့အပေါ်ဖွဲ့စည်းပုံ, ရေ, ဓာတ်ငွေ့နှင့်။
စားပွဲတင် 1. ဓာတုရေးစပ်သီကုံးမှု
0,050 max ကို။
0.25 max ကို။
0,040 max ကို။
0.18 max ကို။
0,55 max ကို။
1.65 max ကို။
0,035 max ကို။
0,24 max ကို။
0.35 max ကို။
1,30 မှ 0,30
0,23 max ကို။
1.50 max ကို။
လိုအပ်မယ်ဆိုရင်မှတ်စုများက), ဒီဇယားသတ်မှတ်ထားသောထက်အခြားအလွိုင်း element တွေကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ခ) နံရံအထူအတွက် 12.5 မီလီမီတာကျော်လွန်တန်း STK540 ၏ပြွန်များအတွက်ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုဝယ်ယူခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအကြား aggreement မှဘာသာရပ်ဖြစ်နိုင်သည်။
စားပွဲတင်2စက်မှု Properties ကို
ဆန့အစွမ်းသတ္တိကို N / mm²
အထွက်နှုန်းအထောက်အထားစိတ်ဖိစီးမှု၏အမှတ် N / mm²
ဂဟေဆော်ဇုန် -N / mm²အတွက်ဆန့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ
50 မီလီမီတာ max ကို။
ဒီစားပွဲ၏မှတ်ချက် 1: D ပြွန်၏အပြင်ဘက်အချင်းဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ချက်21 Nmm² = 1MPa
ယခင်: EN10219Round သံမဏိပိုက်